Behringer Xenyx Q802USB, oo ah fiicnaade ku habboon soosaarista | War gadget
Behringer Xenyx Q802USB, oo ah isku-darka ku habboon isku-darka
Bilaabashada adduunka ee wax soo dejinta waa mid aad u fudud, laakiin dhowr toddobaad ka dib waxaad horeyba u rabtay inaad waxyaabo u sameyso si ka duwan, waana marka ay wax walba isku murgaan. Mar dambe ma isticmaali doontid kaliya iPhone-gaaga iyo sameecadaha dhagaha ee uu ku rido sanduuqa, xitaa kumbuyuutarkaaga iyo makarafoonkaaga. Waxaad dooneysaa inaad yeelato kaqeybgalayaal kale, ku dar mar mar martida ah, waxaad dhigtaa xoogaa muusig ah ama saameyn gaar ah, ugu dambeyntiina xitaa si toos ah ayaad u tabineysaa. Waxaa jira waxyaabo kale oo badan, oo ka yimaada kuwa aan u baahnayn wax maalgashi ah (codsiyada sida Soundflower) si ay u dhammaystiraan istuudiyaha wax lagu qoro oo ay heli karaan dad aad u tiro yar. Waxaan ku degnay ikhtiyaar dhexdhexaad ah: isku-darka Behringer Xenyx Q802USB. Qiimaheeda, cabirkeeda iyo waxqabadkeeda ayaa ka dhigaysa xulashada ugu soo jiidashada badan. Waxaan ku siinaynaa faahfaahinta hoose.
1 Mashiinka wax lagu qaso oo ay heli karaan cid walba
2 Xiriirka USB, soosaarka AUX iyo preamp
3 Isku xirnaanta noocyo kala duwan
4 Dhamaan xakamaynta gacantaada
5 Ku habboon kuwa bilowga ah iyo khubarada
Mashiinka wax lagu qaso oo ay heli karaan cid walba
Way fududahay in la arko qiimaha noocyada qalabka. Kaliya waxaad ubaahantahay inaad fiiriso Amazon waxaadna arki doontaa inay jiraan alaabooyin qiimahoodu si shaki leh uu hooseeyo laakiin leh fikrado nasiib daro ah oo isticmaalayaasha, kuwa kale oo aan la heli karin inta badan dadka. Isku darka Xenyx Q802USB wuxuu ka hooseeyaa xadka € 100 Waxaan u maleynayaa inay calaamadeyn karto xadka inta badan isticmaaleyaasha aan xirfadleyda aheyn ay calaamadeyn doonaan markay sameynayaan maalgashi noocan ah. Haddana haddii aan akhrino qeexitaankiisa xitaa way ka sarreeyaan kuwa aalado kale oo badan oo la mid ah laakiin qiimo sare leh.
Sida iska cad waxa aan ku weydiisan karin sicirkan waa tayo dhisme sida kan miisaska mihnadeed. Caag iyo khafiif ah aluminium aluminium ah waa waxa aan ka heli doonno isku dhafkanYeynaan iska ciyaarin, sidaa darteed waa inaan helnaa boorso gaadiid oo wanaagsan oo aan ku ilaalino, haddii aan dooneyno inaan ka qaadno hal meel ilaa meel kale, wax si macquul ah u suurtagal ah cabirkiisa iyo culeyskiisa awgood, mid ka mid ah faa'iidooyinkiisa moodooyinka kale .
Xiriirka USB, soosaarka AUX iyo preamp
Jadwalka 'Xenyx Q802USB' wuxuu leeyahay qodobo ka soocaya miisaska kale ee isku qiimaha ah, kana dhigaya midka ugu xiisaha badan dhammaantood. Marka hore suurtagalnimada in lagu xiro USB-ga kombiyuutarkaaga, taas oo kuu oggolaan doonta inaad doorato interface-kaas cod-soo-saar ama soo saar. Muhiimad yar malaha waa soosaarka AUX, ama taa badalkeeda, FX SEND sida loogu yeero isku dhafka, oo ku haboon dirida codka kanaalka aan ahayn kan ugu weyn sida aan gadaal ka sharxi doono. Ugu dambayntiina preamplifier, kaas oo u oggolaan doona inta badan makarafoonnada firfircoon inay shaqeeyaan dhib la'aan (waxaan ka hadli doonaa noocyada makarafoonnada maqaal kale). Waxaad ka heli doontaa miisas aad u yar oo leh seddexdan sifo oo ka hooseeya € 100, xitaa ka hooseeya € 200 waan ku dhiiran lahaa in aan idhaahdo.
Isku xirnaanta noocyo kala duwan
Waxaan leenahay ilaa 2 isku xirnaanta makarafoonada XLR (1) oo wata preamps-kooda oo u kaca + 60DB faa'iido, in ka badan in ku filan makarafoonkaaga firfircoon in la maqlo. Iyo waxa ugu fiican waa inay maamusho inay sameyso iyada oo aan lagu darin buuq. Sida iska cad buuq badan oo jawi ah ayaa soo muuqan doona, maxaa yeelay makarafoonka ayaa soo qaadan doona dhamaan qeylada hareerahaaga ka jirta, laakiin taasi waxay noqon doontaa oo kaliya in la helo meesha saxda ah ee kuu oggolaaneysa inaad codkaaga gaarsiiso heerka aad rabto adiga oo aan ka soo qaadin buuqa wax kasta oo hareerahaaga ah adiga Lahaanshaha laba isku xirnaan ayaa habboon haddii aad waligaa qof wax kaga duubi karto "istudiyahaaga" markaa uma baahnid inaad makarafoon wadaagto.
Waxa kale oo aad leedahay laba gal oo kale (2,3) oo aad ku xidhiidhi karto iPhone-kaaga si aad ugu darto muusikada, iPad-ka si aad ugula xiriirto Skype, ama isha codka aad rabto. Waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa Stereo Aux Return (4) cod ahaan hadaad ubaahantahay.
Laakiin mid ka mid ah awooda isku dhafkan waa FX Send, guud ahaan loo yaqaan 'AUX Out' ee qalabka kale. Wax soo saarkan maqalku wuxuu ku habboon yahay in lagu duubi karo boodhadhka adoo adeegsanaya Skype, maxaa yeelay waxay kuu oggolaaneysaa inaad doorato kanaalada codka ee ka imanaya konsol-ka si aad ugu sii gudubto FX Send si aad ugu celiso iyaga Skype iyo si madax-bannaan maqalka ugu muhiimsan ee qalabka. Maxaan ka helaynaa tan? In wada-hawlgalayaashaada Skype aysan ku waalaan codadkooda oo iyaga dib ugu soo noqnoqonaya, iyo inaad sidoo kale ku dari karto codka iyo saamaynta kale codkaaga oo aad ugu dirto iyaga sidoo kale Skype.
Haddii miisku leeyahay wax soo saar dhowr ah, ma laha wax soo saar ka yar. Marka lagu daro isku xirka USB-ga ee kuu ogolaanaya inaad codka ugu dirto kombiyuutarkaaga xiriirkan, waxaad leedahay wax soo saar sameecadaha sameecadaha (6), mid kale oo aad ku xakameyso laba isku xira (7) iyo wax soo saar kale oo muhiim ah oo leh laba isku xirayaal jaakado kale ah (8) Xitaa salka miiska hoostiisa waxaad ku leedahay aqbasho kale oo RCA ah (9). Dabcan ma noqon doonto xiriir la'aan.
Dhamaan xakamaynta gacantaada
Qalabka Behringer Xenyx Q802USB wuxuu sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad xakameyso heerka codka mid kasta oo ka mid ah ilaha ay ka soo baxdo. Marka lagu daro inaad ku siiso awood aad ku darto riixitaanka codka makarafoonadaada kuxiran (10), barbaraha oo buuxa wuxuu kuu ogolaanayaa inaad hagaajiso heerarka afarta cod ee ugu waaweyn ee codadka (11). Sidii aan horey u sheegnay, qunsulku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad go'aansato kanaalada loo diro soosaarka FX Send (12), xitaa heerkee cod ahaan loo diro. Haddii aad rabto kanaal aan laguu soo dirin wax soo saarkaas, waa inaad u dhigtaa eber, gabi ahaanba bidixda. Looma baahna kontaroolada PAN ee makarafoonada iyo isku dheelitirka codadka maqalka (13).
Mid kasta oo ka mid ah 4-ta cod ee ugu muhiimsan ayaa leh xakameyn heer wax soo saar ah oo loogu talagalay iskudhafka ugu weyn. Markaa haddii makarafoonkaagu heer fiican leeyahay laakiin wadahadalka ka soo galaya Skype illaa mid ka mid ah iridda laga soo galo uu la yimaado heer hoose, waxaad si fudud ugu magdhabi kartaa burooyinkan wareega (14). Waxaad sidoo kale ku sameyn kartaa wax soo saarka madaxa (15) iyo iskudhafka ugu weyn ee maraya USB (16).
Ku habboon kuwa bilowga ah iyo khubarada
Xaqiiqdii haddii shaqadaadu tahay mid tafatir ah, qalabkan isku dhafan wuxuu noqon doonaa mid gaaban, laakiin in la yiraahdo waa kaniisadda ugu habboon ee loogu talagalay kuwa bilaabaya adduunkan waa mid aan la fahmi karin. Behringer Xenyx Q802USB waa qase, taas oo ay ugu wacan tahay waxqabadkeeda iyo tayada codkeeda, oo ku jirta heerka qalab-hawleedyo kale oo badan oo qaali ah.. Way cadahay in marka aad gacanta ku hayso miiska «PRO», ​​Behinger uu u egyahay sida toy, laakiin marka aad isticmaasho oo aad qadarto natiijada, aragtidaadu wax badan ayey horumarin doontaa, gaar ahaan markaad ogaato waxa «PRO» ah qiimaha miiska.
Albaabada laga baxo iyo kabixida nooc kasta
Qiimo aad u fiican
Preamps, USB iyo Aux soo baxa
No biiro dilaa
Qalabka tayada wanaagsan
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » Gargaarka » Behringer Xenyx Q802USB, oo ah isku-darka ku habboon isku-darka
Waa salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida loo xaliyo dhibaatooyinka latency ee qalabka baaruhu i siiyo markii aan duubayo. Markii hore sidaas ma ahayn. Ma aqaano inay tahay sababta oo ah waxaan ku daray waxyaabo badan oo kaararka ah oo burburaya… ..
10 tabaha si aad u noqotid khabiir WhatsApp ah
Falanqaynta muraayadaha Mars Gaming MGL1